Semalt Presents 7 Strategy SEO ho an'ny mpikarakara fitsaboana
Ny fitadiavana tetik'ady (SEO) dia manome antoka fa ny tranokalanao dia hita rehefaNy olona iray dia manao fangatahana amin'ny milina fikarohana. Ohatra, raha mitady mpampiasa tranonkala iray ao Boston ny mpampiasa tranonkala, ary anydia podiatrisatra maro ao amin'ny faritra, mazava ho azy, tianao ny fampihetsehanao hipoka ho safidy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana.
Mpitantana Success Successor Semalt ,Jason Adler dia manome fito tapitrisa SEO sy tetikady azo ampiasaina mba hanomezana ny fikambananao anjara amin'ny sehatry ny fahasalamana syManampy anao hametraka ny lanjany amin'ny valin'ny fikarohana - bvc coil burnt taste vaping.
1. Fidio ireo kilalao havanana
Manaova lisitry ny teny feno izay heverinao fa mety ho karazana olonarehefa mitady fikarakarana sy fitsaboana ara-pahasalamana. Rehefa avy nanambatra ny lisitry ny teny fikarohana, dia ambarao ny fahombiazan'izy ireo amin'ny fampiasana azyGoogle's Keyword Planer. Ny fanandramana dia maneho hoe iza amin'ireo andian-teny ireo dia manana fifamoivoizana goavana isam-bolana, saingy amin'ny fifaninanana kelyavy amin'ny toerana hafa.
2. Famaritana ny Meta Data: Famaritana Meta sy Lohateny
Tokony hampidirina ao amin'ny metadata ny fehin-kevitra mifandraika amin'ny fitsabahan'ny SEO anaoamin'ny pejy rehetra sy amin'ny ankapobeny ny tranokalanao. Ny metadata dia manana marika HTML meta eo anelanelan'ny loha fisokafana sy misokatratags amin'ny HTML cypher iray amin'ny rakitra iray. Ny data meta dia manampy ny milina fikarohana mba hamantatra ny pejy iray raha mbola hita ny marika famantaranatoy ny lohatenin'ny pejy.
3..Mamorona Plagiarism-Free Content
Mamorona votoaty manokana ho an'ny tranokalanao amin'ny anaran'ny fikarakaranao fitsaboana mba hiantohanafa mitsangatsangana ary manome anao onenan'ny fifaninanana amin'ny aterineto. Ny fampahafantarana ny mpihaino anao amin'ny fampiasana ny tranokala kinetaham-barotra dia ahafahana manao izanymba hampisehoana ny fahaizanao sy ny hasarobidinao ary amin'ny farany, hahazo ny laharana amin'ny milina fikarohana.
4. Manome toky fa manana Site Map eo amin'ny tranokalanao
Mamolavola tranonkala tsotra ahafahana mamorona matetika ny fanitsakitsahana anaotranonkala miaraka amin'ny milina fikarohana. Ny sarintany dia manome fahalalana momba an'i Yahoo, Bing ary na Google mihitsy aza ny fomba amam-panao sy ny fifandraisana misy anao.
5. Mitadiava fikarohana lalina
Ny ankamaroan'ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia tsy mahavita manome toerana ambony kokoa amin'ny fampisehoana sary,horonan-tsary, sary ary endrika hafa interactif. Fenoy ny vohikalanao amin'ny votoatiny azo itokisana ary tombony amin'ny fampiasana ireo endrika samihafany fikarohana fika.
6. Local Search Advertising
Mihoatra ny antsasaky ny fanadihadiana dia novonoina tamin'ny fampiasana fitaovana finday. A localNy fikarohanao dia fanalahidy lehibe ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana satria ny marary dia mila mitsidika ny toeram-pitsaboana ireo ivon-toerana ireo alohan'ny ahatongavanyampiasao ny tolotr'izy ireo.
7. Ampiasao ireo sehatra sosialy hanatsarana ny fametrahana
Mampita ny fifamoivoizana eo amin'ny tranokalanao ny media sosialy ary manamora ny lalana roafifanakalozan-kevitra eo amin'ny olona mahazatra sy ny fikambanana iray. Ny tranokalan-tserasera dia miantraika amin'ny SEO amin'ny resaka rohyfananganana tranokala sy tranonkala.
Mbola misalasala foana ny maha-zava-dehibe ny SEO amin'ny asanao? Maherin'ny 55 isan-jato izaony olon-dehibe any Amerika manana smartphones, izay manondro ny maha-zava-dehibe ny manandratra avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana mety ho an'ny mararymikaroka amin'ny fitaovan'izy ireo ary avy amin'ny biraon'ny PC. Ny fampiharana ireo fanao voalaza etsy ambony dia hampitombo ny online ianaony fisian'ny fomba amam-panao ary mahatratra ny mpanjifa vaovao.